आज बैशाख २९ गते बिहीबार, राशिफल हेरेर गर्नुहोस् तपाईको आजको दिनको सुरुवात ! « Sansar News
आज बैशाख २९ गते बिहीबार, राशिफल हेरेर गर्नुहोस् तपाईको आजको दिनको सुरुवात !
२९ बैशाख २०७९, बिहीबार ०६:४४
दिन उपलब्धिमूलक रहनेछ। सहयोगी र शुभचिन्तकहरूले साथ दिनेछन्। लगनशीलताले सफलताको उचाइमा पुर्याउनेछ। व्यापारमा लाभ मिल्नेछ। सानो प्रयत्नले लक्ष्य प्राप्त हुनुका साथै दिगो लाभ हुने काम प्रारम्भ हुनेछ। फाइदाको स्रोत पहिल्याउन सकिनेछ। गुरुजनको सुझाव र सन्तानको सहयोग लाभदायी बन्नेछ। रोकिएका काम पूर्ववत् बन्न थाल्नेछन्।
प्रक्रिया नमिल्नाले काम दोहोर्याउनुपर्ने स्थिति आउन सक्छ। बेसुरमा दिइएको वचनले समस्या निम्त्याउला। आँटेको काम भने सम्पादन हुनेछ। एक्लो प्रयासले बन्न नसकेको काम समूहमा गर्दा सम्पादन हुनेछ। व्यापार र साझेदारीमा फाइदा हुनेछ। टाढिएका साथीभाइ नजिकिनेछन्। महत्त्वपूर्ण योजना तत्काल सार्वजनिक नगर्नुहोला। घरेलु समस्या समाधान हुनेछन्।
परिस्थिति अनुकूल देखिए पनि अरूको भरपर्दा काम रोकिन सक्छ। आफ्नो मिहिनेतबाट अरूले फाइदा उठाउने चेष्टा गर्नेछन्। सहयोगीहरूले प्रतिस्पर्धीलाई साथ दिने हुँदा सोचेको उपलब्धि नहुन सक्छ। अरूका लागि बुद्धि खर्चनुपर्ने देखिन्छ। व्यवसायभन्दा सेवामूलक कामबाट राम्रो उपलब्धि प्राप्त हुनेछ। रोग, शत्रु र प्रतिस्पर्धीलाई कमजोर नठान्नुहोला ।
खर्च लागे पनि लगानी बढाउने अवसर जुट्नेछ। दिगो योजनाका लागि ऋण लिने समय छ। पछिका लागि विशेष काममा जग बसाउने मौका छ। परिश्रम परे पनि लक्ष्य प्राप्त हुनेछ। खर्च लागे पनि मालमत्ता जोड्ने समय छ। प्रयत्न गर्दा यात्राको साइत जुर्न सक्छ। शत्रु परास्त हुनेछन् भने रोगबाट उन्मुक्ति मिल्नेछ। प्रतिस्पर्धी समेत सहयोगीका रूपमा उपस्थित हुनेछन्।
अरूको विषयमा चासो राख्दा व्यर्थैमा वादविवाद हुन सक्छ। अर्थ अभावले काम रोकिने सम्भावना छ। साथीभाइको भावना बुझ्न नसक्दा शुभचिन्तकहरू टाढिन सक्छन्। मानसम्मानमा आघात पुग्न सक्छ। धैर्यसाथ गरिएको व्यवहारले भने फाइदा दिलाउनेछ। सहयोगीहरूले साथ दिनेछन् भने मिहिनेतले सम्मानित स्थान दिलाउनेछ। बोली–व्यवहारमा सजग रहनुहोला।
२०७९ वैशाख २९ गते, बिहीवार, (१२ मे २०२२)